The Ab Presents Nepal » महिला हरायको सूचना : छोरालाई स्कुल पुर्याउन गाकी लक्ष्मी ६ दिन सम्म घर नफर्के पछि ! सक्दो सेयर गरौ !
महिला हरायको सूचना : छोरालाई स्कुल पुर्याउन गाकी लक्ष्मी ६ दिन सम्म घर नफर्के पछि ! सक्दो सेयर गरौ !
पोखराको रामबजार स्थित कान्तिपुर चोव्क बाट लक्ष्मी परियार नाम गरेको महिला हराएकि छिन। उक्त महिला असर १ गते आफ्नै टोलबाट हराएको भनि उनको घर परिवारले जानकारी दिएका छन। असर १ गते श्रीमान काममा गएपछि लक्ष्मी आफ्नो दुइ बच्चाहरुलाई स्कुल पठाएर फर्किने बेला आफ्नै टोल बाट हराएकी हुन्।
१ गते आइतबार हराएकी लक्ष्मी परियारको खोजीको लागि प्रहरी निबेदन पनि दिएको उनको परिवारले बताउनु भएको छ। पोखराको रामबजार स्थित कान्तिपुर चोक मा स परिवार स्थायी बसोबास गर्दै आएकी लक्ष्मी परियार बेपत्ता भएको ४ दिन हुदा समेत प्रहरी अनुसन्धान बाट उनको खोजि हुन सकेको छैन। लक्ष्मी को खोजि तिब्र रुपमा भैरहदा पनि उनको पत्ता लागेको छैन।
हराएको लक्ष्मीको कुनै खबर नपाएपछि उनको परिवारले लक्ष्मीको फोटो सामाजिक संजाल लगाएत पत्रपत्रिका मा समेत सार्बजनिक गरेको कुरा लक्ष्मीको परिवार पक्षले जानकारी दिएको छ।यदि तपाइहरुले माथि फोटोमा देकाइएको महिला लाइ कहिँ कतै देख्नुभएमा तुरुन्त तल दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नु गरिदिनु होला र यो खबर सक्दो सेयर गरिदिनु।तपाइहरुको सानो सहयोग ले हराएकी लक्ष्मी भेटिन सक्छ। रबिन बि सी -9803300219